umele abengummi welaseMzantsi Afrika.
umele anikeze ngekopi yencwadi yesazisi eluhlaza okanye isetifiketi sokuzalwa.
umele aqalise ukufunda ngaphambi kokuba abeneminyaka engama-35 ubudala, kwikholeji kawonkewonke okanye kwiyunivesiti esebenzisana ne-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
Umtyalimali usenako nokuvula i-akhawunti yeFundisa Fund ukuze agcinele imfundo yakhe ephakamileyo.
Ngubani onokuvula i-akhawunti yeFundisa Fund?
Nawuphina ummi welaseMzantsi Afrika okanye umhlali wexesha elizeleyo onqwenela ukunceda ekufundiseni umntu amkhathaleleyo, oko nje umfundi engummi welaseMzantsi Afrika kwaye ingeniso yomzi yekhaya lomfundi ayidluli kwi-R180 000 ngonyaka
Akunyanzelekanga ukuba uzalane nalomfundi. Unokuxhasa nawuphina umfundi omkhethayo. Ungaxhasa nawuphi na umfundi omkhethayo ukuba ingeniso yosapho lomfundi ayiyidluli i-R180 000 ngonyaka omnye.
Umele ukuba ubene-akhawunti yeMzantsi okanye enye eyeyeetranzekshini kunye nencwadi yesazisi eluhlaza ene-bar-code.
Yonke imali oyigcinayo yeyakho de ihlawulwe kwikholeji karhulumente okanye iyunivesiti eyamkelwayo yi-National Student financial Aid Scheme (NSFAS) – i-arhente karhulumente enembopheleleko yokuhlawula amaziko emfundo.
Kubalulekile ukuba unganikisi ngemali kuye nawuphina umntu ngaphandle kweenkampani zee-unit trust okanye iibhanki onokuvula kuzo i-akhawunti ye-Fundisa Fund. Ngalo lonke ixesha qinisekisa ukuba ufumana irisithi yayo nayiphina imali oyifaka kwi-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund.
Umele avele kusapho olunengeniso yomzi eli-R180 000 okanye ngaphantsi ngonyaka.
Umele aqalise ukufunda ngaphambi kokuba abeneminyaka engama-35 ubudala, kwikholeji karhulumente okan
ye kwiyunivesiti esebenzisana ne-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
Umtyalimali usenako ukuvula i-akhawunti ye-Fundisa Fund ukuze agcinele imfundo yakhe ephakamileyo.